"MLM လုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ အရေးယူလို့ရသွားပြီ" | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် စုပေါင...
"MLM လုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ အရေးယူလို့ရသွားပြီ"
By အောင်ငြိမ်းချမ်း/Myanmar Now
ဆင့်ပွားစျေးကွက်လုပ်ငန်း (Multi Level Marketing - MLM)လုပ်ကိုင်ခြင်းကိုတားမြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာ ၁၈ တွင် ကြေညာသည်။
နိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိနေသောထိုလုပ်ငန်းကိုအရေးယူ၊ တားမြစ်လိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီးဝန်ကြီးရုံးမှ လက်ထောက်အတွင်းဝန် ဦးခင်မောင်လွင်ကပြောပြထားသည်။
မေး - ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေကို MLM လို့သတ်မှတ်ပါသလဲ။
ဖြေ - MLM ဆိုတာဆင့်ပွားစျေးကွက်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လွှတ်တော်မှာလည်းဆွေးနွေးကြတယ်၊ထိခိုက်မှုတွေရှိလို့လည်းဆွေးနွေးကြတာပေါ့။ တစ်ဖက်ကလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးသလိုတစ်ဖက်ကလည်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီ MLM လုပ်ငန်းတွေကိုအရေးယူမှုတွေ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ သို့သော်လည်း MLM နဲ့ ပတ်သက်ပြီးဥပဒေမရှိဘူး။ မရှိတဲ့အခါကျတော့ သူတို့ကိုတခြားဌာနဆိုင်ရာတွေကသက်ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ပဲကုမ္ပဏီတော်တော်များများကိုအရေးယူခဲ့တယ်။ FDA ဆိုရင် အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးထောက်ခံချက်မရှိဘဲရောင်းချတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ ဥပဒေအရအရေးယူခဲ့တယ်။
စီးပွားကူးသန်းဆိုရင်လည်း ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေအရ လိုင်စင်လျှောက်ထားရမယ့်ပစ္စည်းတွေကို လိုင်စင်မလျှောက်ဘဲနဲ့ တရားမဝင်တင်သွင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အရေးယူခဲ့တယ်။ တစ်ဖက်ကလည်းဥပဒေနဲ့ အရေးယူနိုင်ဖို့ တခြားနိုင်ငံတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ ထိုင်းမှာဆိုရင် DirectSale and Direct Marketing Act ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ မလေးရှားမှာဆိုရင်လည်း Direct Sale and anti Pyramid Actဆိုိပြီးထုတ်ပြန်ထားတယ်။ ဆိုလိုချင်တာကပိရမစ်ပုံစံရောင်းချခြင်းကိုခွင့်မပြုထားဘူး။ ဒါကြောင့်လက်ရှိကအရေးကြီးကုန်စည်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေအရပေါ့၊ အမိန့်တွေကို ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုစီးပွားရေးနှင့် ကူူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီအခွင့်အာဏာအရ MLM လုပ်ငန်းကိုတားမြစ်ခဲ့တာ။ ဒီစျေးရောင်းချခြင်းကိစ္စကိုတားမြစ်သလိုတစ်ဖက်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Direct Sale Law ဆိုတာကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။ ဌာနမှာရှိတဲ့ ဥပဒေပညာရှင်တွေရှိတယ်၊ မဟာဘွဲ့ရတွေ၊ ဒေါက်တာတွေရှိတယ်၊သူတို့နဲ့ ဌာနတွင်းပြင်ဆင်မယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ဆွေးနွေးတာတို့၊ရှေ့နေချုပ်တို့နဲ့ ညှိနှိုင်းတာတို့ ဒါတွေကတော့ ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ လက်ရှိမှာတော့ MLM ဆိုတဲ့ ဆင့်ပွားစျေးကွက်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုံးဝတားမြစ်ထားပါတယ်။
မေး - MLM ကြောင့်နစ်နာခဲ့တဲ့သူတွေကဒီလုပ်ငန်းတွေ လက်တစ်လုံးခြား လုပ်မှာကို စိုးရိ်မ်နေတယ်ဆိုပြီး ပြောကြတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေချာစာရင်းပြုစုထားပါသလား။
ဖြေ - ပြည်ထဲရေးက စာရင်းလုပ်ထားတာရှိတယ်။ လုပ်ငန်းပေါင်း ရဝကျော်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်းစာရင်းရှိတယ်။ အဲဒီအထဲမှာပဲ ကျွန်တော်တို့အရေးယူထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်။ နောက်တစ်ခုက ပြည်တွင်းအခွန်ကအရေးယူထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်။ FDA က ဆိုရင်လည်းအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးတွေကိုသူတို့ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတင်သွင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့်် သူတို့ဥပဒေအရအရေးယူထားတာ။ အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကနာမည်ပြောင်းပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းနာမည်ပဲပြောင်းလို့ရမယ်။ MLM လုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ အရေးယူလို့ရသွားပြီ။ ကုမ္ပဏီကိုအရေးယူတာမဟုတ်ဘူး MLM လုပ်ငန်းကိုအရေးယူတာ၊ တားမြစ်တာ။MLM ဆိုတာကလည်းပိရမစ်ပုံစံစျေးကွက်ရောင်းချတာပေါ့။ ဆင့်ပွားဆင့်ပွားရောင်းချတာပေါ့။ တစ်ယောက်တည်းကနေအများကြီးသွားပြီးရောင်းချတဲ့ဟာမျိုးပေါ့။ Directed Sale မှာဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။ ဘယ်နှစ်ဆင့်အထိရောင်းချခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ MLM ဖြစ်သွားမှာကိုဥပဒေအရထိန်းကျောင်းလိုက်တာမျိုးပေါ့။ အဲဒီတော့ ဥပဒေအရ ပြဋ္ဌာန်းဖို့လုပ်နေတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်းဖောက်ဖျက်ရင်အရေးယူဖို့လုပ်နေတယ်။
မေး -စနစ်သာပြောင်းမယ်ဆိုရင် လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုအရေးမယူဘူးလို့ဆိုလိုတာလား။
ဖြေ - MLM စနစ်လုပ်ထားရင်တော့ အရေးယူမှာပဲ။ ဆေးရောင်းတဲ့သူတွေဆိုရင် နို်င်ငံခြားကနေဆေးတင်သွင်းလာပြီးတော့ လက်ကားရောင်းတယ်၊ လက်လီရောင်းတယ်၊အဲဒါက Directed Sale လေ။ သူရောင်းဖို့အတွက်ကိုသူကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပြီးရောင်းတာကဘာမှသွားပြောလို့မရဘူး။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံခြားကဆေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ဆေးတွေတင်သွင်းလာရင် FDA မှာအစစ်ဆေးခံရမယ်။ FDA ထောက်ခံချက်မပါဘဲနဲ့ အဲဒီဆေးတွေတင်သွင်းလို့မရဘူး။ သတ်မှတ်တဲ့ ဥပဒေအတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော််တို့ကဘာမှပြောမစရာမရှိဘူး။ ဖောက်ဖျက်မယ်ဆိုရင်တော့ အရေးယူရမှာပဲ။ အဓိကကစနစ်ကိုုအရေးယူတာ။
မေး - ဥပဒေအရဘာတွေ ဆက်လုပ်မလဲ။
ဖြေ - ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတစ်ဖက်ကတားမြစ်ထားသလို၊ တစ်ဖက်ကလည်းဥပဒေရေးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်။ တားမြစ်လိုက်ပြီးလုံးဝမလုပ်ရဘူးဆိုတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကိုဥပဒေအရခွင့်ပြုနိုင််ဖို့ နိုင်ငံတကာမှာသုံးနေတဲ့ ပုံစံတွေပေါ့၊ဘယ်လိုခွင့်ပြုနိုင်မလဲပေါ့လေ။ဘယ်လိုခေါ်မလဲ…. လက်ကားဆိုင်ကြီးကပစ္စည်းတွေကိုအကြွေးနဲ့ယူလိုက်တယ်၊ လိုက်ရောင်းတယ်၊ရောင်းပြီးရင်ပိုက်ဆံပြန်အပ်တယ်၊ အမြတ်ယူတယ်ပေါ့၊ ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိတယ်။ ဒါကဥပဒေအရဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့။ ဥပဒေအရဆောင်ရွက်လို့ရအောင် ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဥပဒေကို ပြင်ဆင်နေပြီပေါ့။ သို့သော်လည်းဆင့်ပွားစျေးကွက်ဖြစ်တဲ့ MLM ကိုတော့ တားမြစ်ထားတယ်။
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရသူ ထိုင်းရောက် မြန်မာလုပ်သားနှစ်...
အိန္ဒိယ၌ အသားစားကြက်မှ ကိုရိုနာကူးစက်နိုင်သည်ဆိုသည့် သတင်းမှားကြောင့...
အစ္စရေးရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရကြောင်း နေတန်ယာဟု ပြောကြား
အမေရိကန်၌ မေထုံမဲ့မျိုးပွားနည်းဖြင့် ကိုမိုဒိုနဂါး သုံးကောင်ပေါက်ဖွား
တပ်ရင်းမှူးအပါ ၂၀ ဦးကို ဖမ်းမိထားကြောင်း AA ထုတ်ပြန်ချက် စိစစ်နေဟု...
စပိန်ရှိ ဘိုးဘွားရိပ်သာများတွင် သက်ကြီးလူနာများ စွန့်ပစ်ခံထားရကာ အချ...
Mobile Gaming အတွက် realme 6i နှင့်ဆို Mythic အထိ အထစ်အငေါ့မရှိ သွ...